Wamkelekile kwi Ningbo J & S Botanics Inc., njengoko yasekwa ngo-1996, siye ibe yinkampani ephambili imifuno ziiExtracts, Bee Products and Food Izongezo e China, iimveliso kaninzi ezivunywe yi organic isiqinisekiso zaseKosher kunye ECOCERT. J & S Botanics iye ilinganiswe njenge Ningbo Agricultural Ukukhokela Enterprise ukususela ngo-2009.
J & S Botanics ise kwisithili Beilun, Ningbo mzi, kulula kakhulu ukuba zombini ulwandle kunye nokuthuthwa komhlaba. mveliso Wethu R & D Centre kubagubungela 2.400 eka kunye utyalo-mali $ 4.5 million.The ufakelo kwamaziko kunye nokungena inkqubo ilawulwa ngokungqongqo GMP umgangatho. output yethu yonyaka imifuno nencindi liphelile ku 1000MT, ibandakanya iimveliso 100, thina kakhulu ukuba kuphando ezintsha iimveliso.
Ukuqinisekisa noun Manufacturing ubuchule kunye nokugcina umsebenzi zendalo kwiimveliso zethu, J & S Botanics abaqeshwe Doctor PARIDE evela eItali, okhokela a abaphandi iqela elilwa nokuhlaziya ubuchule lonke ixesha. Ngoku J & S Botanics iye aphantsi amalungelo abenzi ngaphezu kwe-7 kunye nobuxhakaxhaka ezikhethekileyo eziliqela kwinqanaba elihamba. Ezi ezihambele kusinceda sihlale uzinzo imveliso, ukuphucula ukwanela ukusebenza uze phantsi indleko, ekugqibeleni nkulu inzuzo kubaxhasi bethu.
Phantse zonke iimveliso zethu kumazwe angaphandle. iimarike zethu eziphambili ziquka amazwe mpuma Asia, kuMbindi-Mpuma, eSpeyin, eJamani, eFransi, eSwitzerland, Japan, i-USA, Australia, uMzantsi Afrika kunye indawo Taiwan. Nethemba ukuseka tern Intsebenziswano elide nani, ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uzive ukhululekile ukuba usazise.
Benefits 5-HTP Uninzi 5 HTP-eyaziwa ngokuba oxitriptan (inn) itsalwa isithombo enemithi yokukhwela ityholwana lweenkobe ...
Bee Products: Le Supe Original ...
Le nyosi honey eqhelekileyo yenye yezinto eziphilayo ibalulekileyo wendalo. Iinyosi zibaluleke kakhulu yemveliso yokutya ukuba ...